Abaphathi baseMelika bayakwamukela ukuvulwa kabusha komngcele wezivakashi ezigonyiwe
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Abaphathi baseMelika bayakwamukela ukuvulwa kabusha komngcele wezivakashi ezigonyiwe
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • ICanada Breaking News • Izindaba zikaHulumeni • Human Rights • IMexico Breaking News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
Abaphathi baseMelika bayakwamukela ukuvulwa kabusha komngcele wezivakashi ezigonyiwe.
I-National Governors Association ime ngomumo ukusebenzisana nabaphathi ukuqinisekisa ukuphepha okuqhubekayo nempilo yezakhamizi zethu ngenkathi yandisa imisebenzi yezomnotho eza nokuhamba nokuhweba.
UMnyango Wezokuphepha Kwasekhaya e-US umemezele ukuvulwa kwemingcele yase-US kubantu abagonyiwe ngenyanga ezayo.
Abaphathi abaningi baseMelika bazwakalise ukukhathazeka kwabo kuHulumeni ngomthelela oqhubekayo wemikhawulo yokuhamba emingceleni ezindaweni zabo.
Isimemezelo sangoLwesibili siyizindaba ezamukelekile nesinyathelo esibucayi ekunciphiseni umthelela wezomnotho emiphakathini ngenxa ye-COVID-19.
Namuhla, i Inhlangano Yababusi Kazwelonke (NGA) samukele isimemezelo esivela eMnyangweni Wezokuphepha Kwasekhaya (i-DHS) ngomhlaka ukuvulwa kwemingcele yase-US kubantu abagonyiwe abaqala ngenyanga ezayo.
Kuleli hlobo, abaphathi abaningi bazwakalise ukukhathazeka kwi-Administration ngomphumela oqhubekayo we imikhawulo yokuhamba emingceleni ezindaweni zabo - iningi labo okungabanikazi kanye nabasebenzi bamabhizinisi amancane, emindeni abafuna kakhulu ukuqhubeka nokusebenza.
Isimemezelo sangoLwesibili siyizindaba ezamukelekile nesinyathelo esibucayi ekunciphiseni umthelela wezomnotho emiphakathini yethu ngenxa ye-COVID-19. NGA imi ngomumo ukusebenzisana nabaphathi ukuqinisekisa ukuphepha okuqhubekayo nempilo yezakhamizi zethu ngenkathi sikhulisa imisebenzi yezomnotho eza nokuhamba kanye nokuhweba.
Uma kwenzeka ushintsho lwesikhathi esizayo luvumelekile, Ababusi bacela Abaphathi ukuthi basebenzisane nezifunda nezindawo ukuqinisekisa ukuthi ukuqondiswa kwenqubomgomo kubheka imithelela yendawo emiphakathini.
Isekelwe ku-1908, the Inhlangano Yababusi Kazwelonke (NGA) iyinhlangano ehlukaniswe kabili yabaPhathi besizwe abangama-55. Nge-NGA, Ababusi babelana ngemikhuba emihle, babhekana nezinkinga ezithinta izwe kanye nezwe futhi babelane ngezixazululo ezintsha ezithuthukisa uhulumeni wezwe futhi zisekele imigomo yobumbano.